ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဘာသာရေးလူများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုလား။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဘာသာရေးလူများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုလား။ ပြောရန်ခက်ခဲသော်လည်းမှတ်ချက်ပေးပါမည်။ ၎င်းအချက်ကိုလူသိများသည်။ လေ့လာမှုများ၏ကြွယ်ဝမှုသည်ဘာသာရေးလူ ဦး ရေတွင်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှုန်းနိမ့်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုရှိပါသနည်း)
"သိန်" တခါတရံတခုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အစွမ်းထက် aphrodisiac ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆင်ခြင်တုံတရားစိတ်ထဲကြောင့်အန္တရာယ် (ဥပမာပြစ်ဒဏ်၏ခြိမ်းခြောက်မှု,) တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုနည်းသောနှစ်သက်ဖွယ်စေသည်ဒါပေမယ့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ကိုအမှန်တကယ်အဖြစ်အန္တရာယ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ထင် နောက်ထပ် နှိုးဆွသောကြောင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု။ (ဥပမာကောင်းကင်ပြာရေငုပ်ကဲ့သို့) အန္တရာယ်များသောအရာတို့ကို dopamine မြှင့်။ ဤသည်မှာလည်းငရဲ၌နိုင်ပါတယ် roasting ၏စိုးရိမ်မှုတွေကိုဆိုလိုသည်။ (သုတေသနကွောငျးဖျောပွသ စိုးရိမ်စိတ်လိင်စိတ်နိုးထတိုးပွါး.)
မသာတဲ့ငွေပမာဏသည်မသေချာမရေရာအခါ dopamine ပင်ပိုမိုမြင့်မားသွားသည်, ထို။ သူထှတျအထိပျမတိုင်မီတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအသည်းအသန်ကငျြ့ဝတျရုနျး (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အစွမ်းထက်စိတ်ခံစားမှု buildup) မှတဆင့်သွားလျှင်ဒီတော့သူကသူမ၏ / မိမိအ dopamine ပြုစုပျိုးထောင်နေသည် / s ။
တကယ်တော့အခြေအနေကသူရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုမထွက်ခင်အထိစိတ်လှုပ်ရှားစရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကြိုရိုးရာဓလေ့နဲ့နွေးထွေးနေတဲ့ Flasher နဲ့ဆင်တူတယ်။ Dopamine အားလုံးမျှော်လင့်အကြောင်းပါ။ ထို့ကြောင့်“ အပြစ်ရှိသည်ဟူသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူ” သည်သူ၏“ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်နပန်းလုံး” သောအခါသူ၏ dopamine ကိုအမှန်တကယ်မြှင့်တင်နေသည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အခြေအနေသို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားခြင်းဟူသောအတွေးသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အဆုံးစွန်သောငွေပမာဏကို (လိင်စိတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု) ကိုပိုမိုပြင်းထန်စေပြီးစွဲလမ်းစေနိုင်သည် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုနည်းပါးသောကြောင့်) ဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဘာသာရေးလူများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုလား။ အဓိကအချက်မှာအတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခပြင်းထန်နေသရွေ့ကျန်းမာသောလိင်မျှတမှုကိုရှာဖွေရန်တိုးတက်မှုများစွာရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါရုန်းကန်ကိုယ်နှိုက်ကအရမ်းလှုံ့ဆော် / သွေးဆောင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဘာသာရေးအပြစ်ရှိသည်ဟုအလေးအနက်ပြောဆိုသောထောက်ခံအားပေးသည့်အဖွဲ့များသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည်။
သငျသညျဘာသာရေးများမှာပါက overstimulation သဘာဝကျကျ compulsion မှဦးဆောင်ကြောင်းသဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်အော်ဂဇင်တုံ့ပြန်မှုအတိတ်သင့်ရဲ့လမ်းလျော့ပါးဖို့ပိုပြီးထိရောက်မယ့် reboot လုပ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြိမ်းခြောက်, သို့မဟုတ်သင်နောက်တစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ reboot စတင်ရန်ရှိသင့်လျှင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တက်ရိုက်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆီသို့သနားကြင်နာတတ်တဲ့ Be သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ရယ်မောနှင့်သမျှကိုသင်အစပျိုးန်းကျင်လုပ်ကိုင်ဖို့သင်ယူပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းသည် ၄ ​​င်း၏အလုပ်ကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်နားလည်ရန်သင်ယူနိုင်လျှင် (ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိဆွဲဆောင်မှုများအားလုံးကိုသန္ဓေတည်ရန်ကြိုးစားခြင်း) သည်လမ်းခရီးကိုပြုံးရယ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပြန်လျှောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ စောင့်ကြည့် Brain on Porn: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုက ဦး နှောက်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဇီဝဗေဒ၏ကောင်းတစ်ဦးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့။ ထိုအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပဲသင်ဦးနှောက်၏အစာစားချင်စိတ်ယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေး, သဘောထားအမြင်နှင့်အပင်ကငျြ့တရားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်သငျခနျးစာကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်သတိရပါ။ မြင် လိင်နှင့်စာရိတ္တ: ယှဉ်ပြိုင်အာရုံခံအကြားတစ်ဦးက Debate ။
ပိုပြီးအဘို့အတွေ့ ကငျြ့ပကျြအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုရန်ကူညီပါသလား? နှင့် အဆိုပါညာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြံဉာဏ်.
porn စစ်တမ်း (ဘာသာရေး)